Mampiseho Iraniana Mandray Anjara Amin’ny Adin’i Syria Ve Ireto Lahatsary Ireto? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2013 22:52 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, فارسی, Français, عربي, Español, Nederlands, polski, Deutsch, Ελληνικά, English
Fanta-daza ny fanohanan'i Iran ny fitondrana Syriana, saingy kely ihany ny porofon'ny fidinana mivantana eny an-kianja. Ankehitriny efa lasa malaza aoka izany ny andian-dahatsary (video) tahaka ny mampiseho mpiteny Persiana manao fanamiana miaramila, manao bemidina ato anatin'i Syria sy miasa miaraka amin'ny tafi-panjakana.
Tahatahaky ny hoe naharesy tosika ireo andia-tadina mbola manoa ny filoha Bashar al-Assad ny mpioko Syriana ka nahazo raki-dahatsarin'ireo jerena ho mpanolotsaina ara-tafika Iraniana miasa miaraka amin'ny Syriana. Ny lehilahy etsy amin'ny lahatsary etsy ambony io izao dia re miteny Persiana ka manontany olona hahazoana laharam-piantsoana iray any Tehran.
Araka ny New York Times, dia norazain'ny fampahalalam-baovao iraisampirenena ireo lahatsary ireo na dia sarotra aza ny manamarina amin'ny fomba tsy mitongilana [miankina] izay lazainy. Raha ifotorana ny tatitra avy any Iran dia manombatombana ny Lede Blog fa mety noraiketin'ny mpanao lahatsarim-panadihadiana Iraniana iray voatatitra ho maty tany Syria ny sary.
Iraniana Eny an-Dalana
Resadresaka ifanaovana Iraniana roa anaty fira voarakitra an-tsarimihetsika iray hafa milaza no milaza fa mitady olona manana fiofanana manokana afa-mitarika sy manondro lalana ry zareo. Milaza ny mpamily fa “sarotra ny nanesorana [ny mpioko] tamin'io faritra io.” Imbetsaka ry zareo no miserana [mifanena amin'ny] hery miaramila, ary niteny ny mpamily indra mandeha fa mpiambin'ny filoha ry zareo. Misy ihany koa resadresaka amin'ny teny Arabo ifanaovan'ny mpamily Iraniana sy ny miaramila Syriana.
Fakan'ain'ny Miaramila Iraniana
Miteny ny komandy Iraniana iray hoe “Nandefa vondro-tafika tamin'ny ilany akavian'ny kianja ry zareo.”